घुमिफिरी आफ्नै गुँडमा – कदर न्यूज अनलाईन डिजिटल पत्रिका : Oneline Digital Kadarnews:
नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै
तपाई दशैंमा घर जाँदै हुनुहुन्छ भने कहाँ जान कति भाडा लाग्छ लिष्ट सहित जानकारी
ओली र दाहाललाई चुनावी चटारो : एक अर्का विरुद्ध विष बमन
प्रदूषित राष्ट्रको सूचीमा अगाडि रहेको नेपाललाई राष्ट्रिय मापदण्ड घटाउन दबाब
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालय असोज १० गतेदेखि सञ्चालन हुन सक्ने
कोरोना नामक महाव्याधीले जब चीनलाई ग्रास र्गयो, हँसीखुसी सुन्नाराम टाइपका ट्रम्पका ओठमा सायद मधुमय मुुस्कान नाच्यो । महामहिमले मनमनै भने हुन— कोरोनाको सर्वनाशक आक्रमणसँगै गयो अब ‘तेरो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को ताई न तुईको फुर्ती । र, अबलाई तेरो केजाती ‘कनेक्टिभिटी’ फ्याँ डिस्कनेक्टिभिटी हुने भो । हैट्, ‘चाइनिज भाइरस !’ हो, खुच्चिङको भावमा ट्रम्पले कोरोनापीडित चीनलाई यसरी गिज्याए । विश्व विशाल छ— अरू धेरै कुरा थाहा नभए पनि ट्रम्पलाई यति कुरा थियो । यो विशाल विश्वको यत्रो आकाश छिचोलेर कसरी अमेरिका आइपुग्ला र ‘चाइनिज भाइरस’ ? ट्रम्पश्रीले यसरी गहन चिन्तन गरे हुनन् ।
लेखक : खगेन्द्र संग्रौला
प्रकासित : २२ चैत्र २०७६, शनिबार
म स्व–क्वारेन्टाइन उर्फ स्व–गृह प्याकिसबन्दीमा छु । पृष्ठभूमिमा कोरोना भाइरस आतङ्क छ, मेरो नाकसामु छ कडीकडाउ सरकारी आदेश । सनक सिं महामहिम डोनाल्ड ट्रम्प शासित अमेरिकाबाट फर्केर जन्मथलो टेकेको भयो आज बाह्र दिन । ऐकान्तिक प्याकिसबन्दीमा खुम्चिएर बिताएका पट्यारलाग्दा बाह्र दिन ! अचम्म लाग्छ, फ्लाई दुबईको हवाई जहाज चढेर मसँगै फर्केका थुप्रै सहदेशवासीमध्ये सायद कोही नै क्वारेन्टाइनमा छैन, केवल म एकजना छु । सरकारी आज्ञाप्रति नतमस्तक मुद्रामा अतिशय बफादार म ! ‘तँ अविश्वसनीय नाथेको आदेशलाई लाइदियो त यात्रुगणले धोती’ भनी कसैले गिज्याए सरकार सायद शानका साथ भन्ला– चाबेलतिर हेर !
फिर्ती यात्रा थाल्न लाग्दा ओरिकामा कोरोना भइरसको असर हो कि होइनजस्तो मात्र थियो । राष्ट्रपति ट्रम्प अझै हर्षातिरेकको मुडमा थिए । अमेरिका र्पयो समस्त मानवजगत्को शोषण र दोहनकारी बूढो साँढे । चीनले तन्नेरी बहरको औतारमा जगत्को मैदान ताक्दा बूढा ट्रम्पलाई औडाहा भयो । कोरोना नामक महाव्याधीले जब चीनलाई ग्रास र्गयो, हँसीखुसी सुन्नाराम टाइपका ट्रम्पका ओठमा सायद मधुमय मुुस्कान
नाच्यो । महामहिमले मनमनै भने हुन— कोरोनाको सर्वनाशक आक्रमणसँगै गयो अब ‘तेरो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को ताई न तुईको
फुर्ती । र, अबलाई तेरो केजाती ‘कनेक्टिभिटी’ फ्याँ डिस्कनेक्टिभिटी हुने भो । हैट्, ‘चाइनिज भाइरस !’ हो, खुच्चिङको भावमा ट्रम्पले कोरोनापीडित चीनलाई यसरी गिज्याए । विश्व विशाल छ— अरू धेरै कुरा थाहा नभए पनि ट्रम्पलाई यति कुरा थियो । यो विशाल विश्वको यत्रो आकाश छिचोलेर कसरी अमेरिका आइपुग्ला र ‘चाइनिज भाइरस’ ? ट्रम्पश्रीले यसरी गहन चिन्तन गरे हुनन् । अनि त्यत्रो भवसागर एट्लान्टिक महासागर तरेर… ? उन्मादी आवेगको घोडामा सवार भएका ट्रम्पलाई कोरोना हवाई जहाज वा पानी जहाज चढेर अमेरिका आउँछ भन्ने कुराको सायद हेक्का रहेन । महान, सभ्य र स्वच्छ अमेरिकामा चीनबाट उब्जिएको फोहोर कोरोना भाइरस आउने ? असम्भव ! दूरदृष्टिका हदै गरिब ट्रम्पले आसन्न महामारीलाई चुट्कीको भरमा उडाइदिए । यसरी सोच्दा ट्रम्पको पश्चगामी चिन्तन तरङ्गमा अन्धराष्ट्रवादका भाइरसहरु जमजमाइरहेका हुँदा हुन् । र, निजहजुरको सङ्कीर्ण चित्त नश्लीय उन्मादको अन्धवेगी नशाले त्यसैत्यसै लठ्ठ भएको हुँदो हो ।
एकातिर मलाई प्रियजनहरुको बस भन्ने आग्रह छ, अर्कोतिर मलाई गइहालूँ भन्ने हतारो छ । तर चित्तको अन्तरमा यसो कि उसोको दुविधा र द्वन्द्व पनि छ । सुनेको छु, अमेरिकी एयरपोर्टमा, दुबईको ट्रान्जिटमा र नेपालको विमानस्थलमा तापक्रम नापिन्छ । तापक्रम छिसिक्क बढी देखियो कि घ्याच्च बाटो छेकिन्छ । अनि हुन्छ के ? अनिपछिको निश्चित उत्तर मसँग छैन, मलाई त केवल त्यसपछिको अनिश्चिता मात्र थाहा छ । यो अनिश्चितता भययुक्त छ । बीचैमा पक्रेर ‘चलो क्वारेन्टाइन’ भन्दै बिरानो देशमा मलाई कतै एकलासमा लागेर थुने भने ?
मलाई ‘अलि दिन अमेरिकामै बस, कोरोना आतङ्क मत्थर भएपछि घर जाऊ’ भन्ने शुभचिन्तक एक होइन, अनेक थिए । त्यसो त मेरा छोराछोरीले पनि गर्नुसम्म कर नगरेका होइनन् । ‘आफ्नै जिद्दीले गर्दा अस्ति मात्र प्रोस्टेटबाट त्यत्रो दुःख पायौँ, चेत्दै नचेती फेरि जिद्दी गरेर मरिहाल्न मन छ ?’ स्वास्थ्यकर्मी छोरीको यो आशयको प्रश्नमा ममतायुक्त कटाक्षको सन्तापमय भाव थियो ? तर मेरो मन भने सिङ्गै यतै थियो । मेरा पकाइखाने भाँडाकुँडा यतै थिए । मेरा पढ्ने पुस्तक यतै थिए । मेरा लाउने लुगा यतै थिए । मेरो घाम छेल्ने र पानी ओत्ने छानो यतै थियो । मन मिलेका मेरा साथीसँगी यतै थिए । नित्य प्रातः लमक् गर्ने मेरो प्रिय वनकालीपन यतै थियो । जीवनभरका पदचापहरुद्वारा निर्मित मेरो स्मृति–शृङ्खला यतै थियो । त्यसो त मेरा सानातिना सामाजिक दायित्व र कर्तव्यहरु पनि त यतै थिए ।
एकातिर मलाई प्रियजनहरुको बस भन्ने आग्रह छ, अर्कोतिर मलाई गइहालूँ भन्ने हतारो छ । तर चित्तको अन्तरमा यसो कि उसोको दुविधा र द्वन्द्व पनि छ । सुनेको छु, अमेरिकी एयरपोर्टमा, दुबईको ट्रान्जिटमा र नेपालको विमानस्थलमा तापक्रम नापिन्छ । तापक्रम छिसिक्क बढी देखियो कि घ्याच्च बाटो छेकिन्छ । अनि हुन्छ के ? अनिपछिको निश्चित उत्तर मसँग छैन, मलाई त केवल त्यसपछिको अनिश्चितता मात्र थाहा
छ । यो अनिश्चितता भययुक्त छ । बीचैमा पक्रेर ‘चलो क्वारेन्टाइन’ भन्दै बिरानो देशमा मलाई कतै एकलासमा लागेर थुने भने ? अथवा दुबईमा बाटो छेकेर त्यत्तिकै अलपत्र पारे भने ? आफूसँग न अमेरिका फर्किने टिकट छ, न सहारा खोज्न चिनजानको कोही छ, न बासी अनुहार लिएर अमेरिका फर्किन मनै छ । मानसिक दुविधा र द्वन्द्वको बीचमा मैले अठोट गरेँ— आ… जाने हो नेपाल । जे पर्छ, त्यो टर्छ । आखिर जीवन अनेक अनिश्चयहरुबीच एकाध निश्चयको खोजी गर्ने अबिराम यात्रा न हो । जीवनका सबै अनिश्चयहरुको पहिल्यै उत्तर पाइँदो हो त जिउनुको प्रयोजन र अर्थ नै के हुँदो हो र ?
साँझपख नेपाली एयरपोर्टमा पदार्पण गर्नु के थियो मेरो मनमा बेचैनीका लहरहरु उठे । अब के हुने हो, भाइ ? चेकजाँचले अतिरिक्त ताप देखायो भने के गर्लान् ? सके खरिपाटी चलान गर्लान् । अथबा टेकू अस्पताल ? मलाई डरडर लागेर आयो । तर एयरपोर्टमा सनातनी कर्मकाण्ड सिवाय केही भएन । बडेमाको ड्रममा पछाडि तरल तत्त्व छ, अगाडि तत्त्व छर्किनेका हातमा पाइप छ । पुरेतले भक्तहरुका देहमा गहुँत छर्किएझैँ ऊ यात्रुहरुमाथि झ्याप्प तरल छर्किन्छ । त्यो झ्याप्पले कपाल भिज्ने गरी कसैलाई लाग्छ, कसैलाई एक छिटो पनि लाग्दैन ।
टिकट काट्ने सहदेशवासी मनुवालाई सोधेँ– आए हुन्छ, होइन बन्धु ? उनले एउटा जुक्ति सुझाए । तामक्रम जाँच्नु दुई घण्टाअघि दुदीओटा सिठामल खानू, भए पनि ज्वरो सुटुक्क भूमिगत हुन्छ । तर मैले सिठामल खाइनँ । मलाई केही भएको छैन, बित्थामा खानु किन ? मनको बाघद्वारा बित्थामा खाइनु किन ? ब्याकप्याक बोकेर म बाटो लागेँ । साथमा जीवनसङ्गिनी थिइन् । अमेरिकी एयरपोर्टमा तापक्रम जाँचमा ट्याक्क पास भइयो र हुइँय आकाशमा उडियो । फ्लाई दुबईको विमान अजङ्गको थियो, सुनिजानेअनुसार पाँच सय सिटको । छाँटले विमानका दुई तिहाइ सिट खाली थिए । ती थिए वास्तवमा कोरोनाको डरले खाली भएका सिटहरु । ती खाली सिट हाम्रा लागि खुदो भए । व्यङ्ग्यविनोदी भावमा मनमनै कतैका कसैले नसुन्ने गरी ‘धन्य करुणामयी कोरोना’ भन्दै हामी बूढाबूढी सिट फेरिफेरि सुत्यौँ । असहज परिस्थितिको हाम्रो यात्रा कमसेकम त्यो दूरीभरि बडो सहज भयो ।
दुबई ट्रान्जिटमा पनि तामक्रम जाँचमा ट्याक्क पास भइयो र फटाफट चढियो विमान । थोत्रोथोत्रो विमान मझौला आकारको थियो । त्यसमा यात्रु सबै नेपाली थिए । ती सब भाबर खाडी मुलुकमा पसिना, आँसु र रगत बगाएर विप्रेषणको ऊर्जाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई घिटिघिटी धान्ने कर्मवीर–वीराङ्गनाहरु थिए । तिनका अनुहारमा थकित, आजित र पराजित भाव उत्रेको थियो । ती कोरोना आतङ्कमाझ आफ्नो र परिवारको प्राण धान्ने काम गुमेर वा छाडेर हठात् स्वदेश फर्किँदै थिए । किन ? तिनका आँखामा अव्यक्त उत्तर थियो– मर्नैपरे आफ्नै देशमा प्रियजनहरु माझ मर्न । छोइछिटोकारी कोरोना भाइरसले प्रियजनहरुमाझ मर्न पनि दिँदैन भन्ने वीभत्स यथार्थ सायद तीमध्ये धेरैलाई थाहा थिएन ।
साँझपख नेपाली एयरपोर्टमा पदार्पण गर्नु के थियो मेरो मनमा बेचैनीका लहरहरु उठे । अब के हुने हो, भाइ ? चेकजाँचले अतिरिक्त ताप देखायो भने के गर्लान् ? सके खरिपाटी चलान गर्लान् । अथवा टेकू अस्पताल ? मलाई डरडर लागेर आयो । तर एयरपोर्टमा सनातनी कर्मकाण्ड सिवाय केही भएन । बडेमाको ड्रममा पछाडि तरल तत्त्व छ, अगाडि तत्त्व छर्किनेका हातमा पाइप छ । पुरेतले भक्तहरुका देहमा गहुँत छर्किएझैँ ऊ यात्रुहरुमाथि झ्याप्प तरल छर्किन्छ । त्यो झ्याप्पले कपाल भिज्ने गरी कसैलाई लाग्छ, कसैलाई एक छिटो पनि लाग्दैन । त्यो यात्रुहरुका देहबाट सम्भावित कोरोनालाई
खालेको रे तिनको बाउको ! त्यसपछि तापक्रम जाँच्ने कर्मकाण्ड सम्पन्न भयो । र, अध्यागमन अधिकारीले पासपोर्टमा छाप ठोकर निकासको बाटो दिए । तिनले अनेक कुरा सोधेर हैरान पार्लान् कि भन्ने लागेको थियो, केही सोधेनन् । मलाई त चिनेर कथित ‘ठूलो मान्छे’ भनेर सोधेनन् रे लौ । अरू यात्रुलाई पनि फिटिक्क केही सोधेझैँ लागेन । अध्यागमन अधिकारीसामु उभियो, फलान्ठाउँबाट आएको हुँ भन्यो, झ्याप्प छाप ठोकायो, फटाफट बाटो लाग्यो । बस्, ख्यालख्यालमै काम तमाम । यो कोरोना भाइरसको आतङ्ककाल हो भन्ने आभासै नहुने । मानौँ नेपालको कोरोनाकालीन जीवन पूर्णरूपले भगवान् भरोसामा चल्दो छ ।
घर आइपुगेँ । क्वारेन्टाइन ! कानमा टिनटिन सरकारी आदेशको घण्टी बज्यो । सोचेँ, आखिर आफ्नै लागि त हो । सङ्कटमा आफू जोगिन अरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ । यो महाविपत्तिमा एक्लै कहीँ कोही जोगिँदैन । बस, झ्याम्म गेट थुनेर स्वेच्छिक कैदमा प्याकिसबन्द भए म । र, सुरु भयो स्व–गृहमा चौध दिने स्व–क्वारेन्टाइनको मेरो पहिलो दिन ।
कोरोना महामारीकै बेला अर्को त्रास थपिएको छ, निपाह भाइरस
नेपालमा १,४७८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि ६ जनाको मृत्यु १ हजार ६३० जना निको
प्रकासित : ६ आश्विन २०७८, बुधबार
कोरोना खोप नलाएका र पिसिआर रिर्पाट नगरको ले दशैं तिहारमा घर जान नपाउने
प्रकासित : ५ आश्विन २०७८, मंगलवार
नेपालमा थप १,३३० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि ५ जनाको मृत्यु
How do Ignorant People See Me ? I am female author from Nepal
देशभर १ हजार ९५ जना संक्रमित थपिए ८ जनाको मृत्यु
प्रकासित : ४ आश्विन २०७८, सोमबार
प्रकासित : ३ आश्विन २०७८, आईतवार